Izicelo zabaququzeleli beeHolo | Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi yeOta
Ukuthintela ukusasazeka kosulelo olutsha lwe-coronavirus, sicela umququzeleli ukuba aqonde kwaye asebenzisane nezi zinto zilandelayo xa usebenzisa indawo.
Ukongeza, xa usebenzisa indawo, nceda ujonge kwizikhokelo ezenziwe liqela ngalinye loshishino kwaye ucele ukuqonda kwakho kunye nentsebenziswano ekuthinteleni ukusasazeka kosulelo olutsha lwe-coronavirus.
Uluhlu lwezikhokelo zokuthintela ukwanda kosuleleko lushishino (iwebhusayithi yeCandelo looNobhala beKhabhinethi)
Ukulungelelaniswa kwangaphambili / intlanganiso
Umququzeleli uya kuba nentlanganiso kunye nesibonelelo malunga neenzame zokuthintela ukusasazeka kosulelo ngexesha lesicelo sokusetyenziswa kwelo ziko okanye ngexesha leentlanganiso zangaphambili.
Ekuqhubeni lo msitho, siza kuthatha amanyathelo okuthintela ukusasazeka kosulelo ngokungqinelana nezikhokelo zeshishini ngalinye, kwaye silungelelanise ukwahlulwa kweendima phakathi komququzeleli nendawo leyo.
Nceda usete ishedyuli yesisa yokulungiselela, ukuqhelisela kunye nokususa.
Nceda usete ixesha lekhefu kunye nexesha lokungena / lokuphuma kunye nexesha elininzi.
Xa ubambe umcimbi ongekho phantsi kokuqulunqwa kwe "Infection Control and Safety Plan", yenza kwaye upapashe "Uluhlu lokutshekisha ngexesha lokubamba umcimbi" olubekwe yi-Tokyo Metropolitan Emergency Measures and Infection Control Cooperation Fund Centre. Ndiyacela.Ngemibuzo, nceda ufowunele i-TEL: 03-5388-0567.
Uluhlu lokukhangela ngexesha lomsitho (idatha ye-Excel)
Malunga nolwabiwo lwezihlalo zabaphulaphuli (indawo yokuhlala yamancedo)
Njengomgaqo jikelele, izihlalo kufuneka zigcinelwe abathathi-nxaxheba ukuze umququzeleli akwazi ukulawula nokulungelelanisa imeko yokuhlala.
Nceda uthathe amanyathelo abanzi okuthintela usulelo, njengokunxiba isigqubuthelo sobuso, ukusasaza uxinzelelo lokuthetha, kunye nokuthatha amanyathelo okuzikhusela ngumququzeleli.
Kwimidlalo ekulindeleke ukuba izinyaswe linani elikhulu labantu abadala kunye nabantu abanezigulo ezinganyangekiyo, kukho umngcipheko omkhulu wokuhlaselwa kwimeko yosulelo, ke nceda ucinge ngokuthatha amanyathelo ngononophelo.
* Ukuphathwa kwezihlalo zangaphambili: Nceda ujonge kwizikhokelo zeshishini kwaye ukhusele umgama owaneleyo ukusuka ngaphambili eqongeni.Nceda uqhagamshelane neziko ukuze ufumane iinkcukacha.
Amanyathelo othintelo losulelo kumaqela ahambelana nalawo afana nabadlali
Umququzeleli kunye namaqela anxulumeneyo bayacelwa ukuba benze iinzame zokuthintela usulelo kangangoko kunokwenzeka, njengokuthatha ikhefu elaneleyo phakathi kwabadlali ngokwendlela yokubonakalisa.Jonga izikhokelo zeshishini ngolwazi oluthe kratya.
Ngaphandle kwabadlali, nceda unxibe imaski kwaye ubulale iintsholongwane ezandleni zakho kakuhle kwiziko.
Kwiindawo apho inani labantu elingachazwanga linokuchukumisa ngokulula, njengamagumbi okunxiba kunye namagumbi okulinda, fakela isisombululo sokubulala iintsholongwane kwisicoci sesandla kunye nokubulala iintsholongwane rhoqo.
Ngokuphathelele ukutya nokusela eholweni, kulungile ukuba ube nesidlo sasemini njl.njl ixesha elifutshane emva kokunyanzelisa ukutya okuthe cwaka kunye nokuqinisekisa ukungena komoya (awukwazi ukutya okanye ukusela kwizihlalo zeholo).
Khetha umntu ophethe izixhobo, izixhobo, izixhobo, njl., Kwaye uthintele ukwabelana ngabantu abangachazwanga.
Ukongeza, nceda uthabathe amanyathelo awaneleyo okuthintela usulelo xa usenza / usenza, ulungiselela / ususa, njl.
Ukuba ukrokrela usuleleko, yixele kwindawo leyo ngokukhawuleza uze ubabekele bucala isikhululo soncedo sokuqala esikhethiweyo.
Amanyathelo othintelo losulelo lwabathathi-nxaxheba
Abathathi-nxaxheba bayacelwa ukuba balinganise iqondo lobushushu ngaphambi kokuza kwindawo leyo, kwaye nceda waziswe kwangaphambi kwamatyala apho baya kucelwa ukuba bayeke ukuza kwindawo leyo.Ngelo xesha, nceda uthathe amanyathelo okuqinisekisa ukuba abathathi-nxaxheba abafumani bunzima kwaye bathintele ukwamkelwa kwabantu abaneempawu.
Ayisiyomlinganiso yabathathi-nxaxheba kuphela, kodwa nomququzeleli kufuneka athathe amanyathelo afana nomlinganiso weqondo lobushushu xa engena kwindawo leyo.Umququzeleli uyacelwa ukuba alungiselele izixhobo zokulinganisa ubushushu (ithemometha engadibaniyo, ubushushu, njl.njl.).Ukuba kunzima ukulungiselela, nceda unxibelelane nesibonelelo.
Xa kukho umkhuhlane omkhulu xa kuthelekiswa nobushushu obuqhelekileyoUkuba unenye yezi mpawu zilandelayo (*) okanye ezi zilandelayo, nceda uthathe amanyathelo njengokulinda ekhaya.
* Umzekelo womgangatho "xa kukho ubushushu obungaphezulu kobushushu obuqhelekileyo" ... Xa kukho ubushushu obungu-37.5 ° C okanye ngaphezulu
Ukuze uthintele ukuxinana xa ungena kwaye uphuma, nceda ugcine umgama owaneleyo ngokungena kwaye uphume kunye nexesha lag, ukukhusela abancedisi, ukwaba abasebenzi, njl.
I-buffet iya kuvalwa okwangoku.
Nceda usete ixesha elaneleyo lokuphuma kwangaphambili kwaye uyalele ukuphuma kunye nexesha elishiyekileyo lendawo nganye yendawo.
Nceda uyeke ukulinda okanye ukutyelela emva komdlalo.
Nceda uzame ukuqonda amagama kunye neenkcukacha zonxibelelwano ezingxamisekileyo zabathathi-nxaxheba ngokusebenzisa inkqubo yetikiti.Ukongeza, nceda wazise abathathi-nxaxheba kwangaphambili ukuba olo lwazi lunokunikwa amaziko oluntu afana namaziko ezempilo oluntu njengoko kufuneka, njengaxa umntu osulelekileyo evela kubathathi-nxaxheba.
Nceda usebenzise isicelo sokuqinisekisa unxibelelwano (COCOA) se-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo, Umsebenzi Nentlalontle.
Abathathi-nxaxheba abafuna ukuthathelwa ingqalelo, abantu abakhubazekileyo, abantu abadala, njl., Nceda uqwalasele amanyathelo okulwa kwangaphambili.
Nceda utsalele ingqalelo kuthintelo losulelo ngaphambi nasemva komsebenzi, njengokusetyenziswa okubanzi kwezothutho kunye neeresityu.
Amanyathelo othintelo ekusasazeni usulelo
Umququzeleli kufuneka aqhagamshelane neziko ngokukhawuleza ukuba kukho umntu okrokrelwa ukuba wosulelekile kwaye axoxe ngempendulo.
Njengomgaqo oqhelekileyo, umququzeleli kufuneka agcine amagama kunye neenkcukacha zonxibelelwano ezingxamisekileyo zabantu ababandakanyekayo kumsitho nakwabathathi-nxaxheba, kwaye agcine uluhlu olwenziwe ixesha elithile (malunga nenyanga enye).Ukongeza, nceda wazise abantu ababandakanyekayo kumsitho kunye nabathathi-nxaxheba kwangethuba ukuba olo lwazi lunokunikwa amaziko oluntu afana namaziko ezempilo oluntu njengoko kufuneka.
Ukusuka kwimbono yokukhuselwa kolwazi lomntu, nceda uthathe amanyathelo afanelekileyo okugcina uluhlu, njl njl, kwaye ululahle ngokufanelekileyo emva kwexesha elidlulileyo.
Nceda ulumke xa uphatha ulwazi lwabantu abosulelekileyo (kubandakanya abantu abahlala nabo, njl. Njl.) Esele yenzekile, njengoko iya kuba lulwazi lomntu siqu.
Nceda usete iikhrayitheriya zokwazisa esidlangalaleni kunye nokusebenza xa umntu osulelekileyo esenzeka.
Amanyathelo okuthintela usulelo eholweni
Nxibelelana namanyathelo othintelo losulelo
Umququzeleli kufuneka afake isicoci sezandla kwiindawo eziyimfuneko njengokungena nokuphuma kwendawo kwaye ayihlole rhoqo ukuze kungabikho nqongophala.
Umququzeleli kufuneka rhoqo abulale iintsholongwane kwindawo efikeleleka lula kuluntu jikelele.Nceda ulungiselele isisombululo sokubulala iintsholongwane ngumququzeleli.
Ukuthintela usulelo lokunxibelelana, nceda uqwalasele ukwenza lula ukutikiti ngexesha lokwamkelwa.
Nceda ukunqande ukuhambisa amaphetshana, amaphetshana, amaphepha emibuzo, njlnjl.Kwakhona, ukuba ayinakuphepheka, qiniseka ukunxiba iiglavu.
Nceda uyeke ukunxibelelana nabantu ababandakanyekayo kwintsebenzo kunye nabathathi-nxaxheba, njengokundwendwela emva komdlalo.
Nceda uyeke ukubonisa okanye ukufaka.
Nceda unciphise indawo nganye efikelelekayo njengabathathi-nxaxheba kunye namaqela ahambelana nayo (thintela abathathi-nxaxheba ekungeneni kwindawo yokunxiba, njl.).
Amanyathelo okuthintela usulelo lwamathontsi
Njengomgaqo ngokubanzi, abathathi-nxaxheba kufuneka baqiniseke ukuba banxibe iimaski nangexesha lomsitho.
Nceda uthathe amanyathelo okuthintela ukuxinana ngexesha lekhefu kunye nokungena / ukuphuma.
Ukuba kukho abathathi-nxaxheba abenza ilizwi elikhulu, umququzeleli kufuneka aqwalasele umntu ngamnye.
Amanyathelo othintelo losulelo phakathi kwamaqela ahambelana (ngakumbi abadlali) ers abathathi-nxaxheba
Nceda uyeke ukwalathisa oko kwandisa umngcipheko wosulelo (ukucela ukugcoba, ukukhulisa abathathi-nxaxheba eqongeni, ukunika abahlanu phezulu, njl.).
Nceda uvumele indawo eyoneleyo kwaye unxibe iimaski xa ukhokela kwaye ukhokela abathathi-nxaxheba.
Kwikhawuntari ezinxibelelana nabathathi-nxaxheba (ukwamkelwa kwesimemo, iikhawuntara zetikiti elifanayo zosuku olunye), njl., Nceda ukhusele abathathi-nxaxheba ngokufaka izahlulo ezinjengeebhodi ze-acrylic kunye namakhethini e-vinyl angafihliyo.
Amanyathelo othintelo losulelo phakathi kwabathathi-nxaxheba
Kunyanzelekile ukuba unxibe imaski kwizihlalo zabaphulaphuli, kwaye nceda uqiniseke ukuba uyinxibe kakuhle ngokuyisasaza kwaye uyithengise kubantu abangathathi nxaxheba kwaye uhoye ngokukodwa.
Nceda uvumele ixesha elaneleyo lekhefu kunye nexesha lokungena / lokuphuma, uthathela ingqalelo umthamo kunye nomthamo wendawo, yokungena / yokuphuma ngeendlela, njl.
Nceda ubazise ukuba mabayeke ukuthetha ngexesha lekhefu naxa bengena naxa bephuma, kwaye ubakhuthaze ukuba bayeke ukuncokola ubuso ngobuso kwaye bahlala imigama emifutshane kwigumbi lokungenisa.
Ukuba kulindeleke inani elikhulu labathathi-nxaxheba, nceda usebenzise ixesha elishiyekileyo kuhlobo ngalunye lwetikiti kunye nendawo xa usuka kwizitulo zabaphulaphuli ngexesha lekhefu okanye xa ushiya ukuthintela ukuma.
Kwizindlu zangasese ngexesha lekhefu, nceda ukhuthaze amalungiselelo anendawo eyaneleyo ngokuqwalasela ubungakanani bendawo yokwamkela iindwendwe.
Nceda ugqibe ukutya kwakho ngaphambi nasemva kokwamkelwa kangangoko kunokwenzeka.
Ngenxa yokusetyenziswa kwexesha elide kwendawo, kunokwenzeka ukuba udle kwigumbi, kodwa nceda uqaphele la manqaku alandelayo.
Qinisekisa ukungena komoya.
Hlala ngendlela engeyiyo ebusweni.
Vumela isithuba esaneleyo phakathi kwabasebenzisi.
Gwema ukwabelana ngezinti kunye neepleyiti phakathi kwabasebenzisi.
Yeka ukuthetha ngexesha lokutya.
Nxiba imaski xa kunokwenzeka.
Ukuthengiswa kwempahla, njl.
Xa kugcwele, nceda uthintele ukwamkelwa kunye nolungiselelo njengoko kufuneka.
Nceda ufake isibulala-ntsholongwane xa uthengisa iimpahla.
Abasebenzi ababandakanyekayo ekuthengisweni kweempahla kufuneka banxibe iiglavu njengoko kufuneka ukongeza ekunxibeni iimaski.
Xa uthengisa iimpahla, nceda musa ukuphatha umboniso weemveliso zesampulu okanye iimveliso zesampulu abantu abaninzi abanokuzichukumisa.
Cinga ukuthengisa kwi-Intanethi okanye wenze imali ngaphandle kwemali ukuze unciphise ukuphathwa kwemali kangangoko kunokwenzeka.
Ukucoca / ukulahla inkunkuma
Qinisekisa ukuba unxibe iimaski kunye neiglavu zabasebenzi abacoca balahle inkunkuma.
Emva kokugqiba umsebenzi, hlamba kwaye ubulale iintsholongwane ezandleni zakho.
Nceda ulawule inkunkuma eqokelelweyo kakuhle ukuze abathathi-nxaxheba bangadibani nayo ngqo.
Nceda uthathe inkunkuma evelisiweyo ugoduke nayo. (Ukuhlawulwa okuhlawulelweyo kunokwenzeka kwiziko).